Al-shabaab oo sheegatay dilkii shaleey loo geystay mid kamid ah saraakiisha Nabad Sugid Qaranka. |
Al-shabaab oo sheegatay dilkii shaleey loo geystay mid kamid ah saraakiisha Nabad Sugid Qaranka.
xarakada al Shabaab ee ka dagaalanta koofurta, Bartamaha iyo Bariga Soomaaliya ayaa waxa ay ku faaneen in ay khaarijiyeen sarkaaln nabad sugidda Soomaliya kamid ah oo waayahaan ay dayaxa ku baadi goobayeen.
Dilka sarkaalkaan ayaa kooxdu ku sheegatay war-saxaafadeed lasoo dhigay Barta Twitter-ka Shabaabku ay ku leeyihiin, iyaga oo intaa ku daray in Ciidankooda sida gaarka ah u tababaran ay isgoyska Banaadir ee degmada Wadajir ku Khaarijiyeen Sarkaalka oo lagu magacaabi jiray Cawil Xasan.
Cawil ayaa shabaabku sheegeen in uu laf dhuun gashay oo iyaga loo soo diray dibadana wax ku soo bartaty
“Mujaahidiintu waxay shacabka muslimiinta ah ka hor leexiyeen sarkaal murtad ah oo lagu magacaabi Jiray Cawil Xasan Ninkaasi dhibaata xoogan ayuu ku hayay shacabka Muqdisho”, bayaanka ayaa lagu sheegay.
Si kastaba Sheegashada Shabaabka dowlada Soomaliya, gaar haan hey’adda Nabad Sugidda qaranka Soomaaliyeed wax war ah kama soo sarin.